INDLU EMATHINI - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGiulio
I-Casa nel Bosco ifanelekile kwabo bafuna indalo, ukuphumla kunye nokuthula. Ukuntywiliselwa kuhlaza lwemithi yomnquma eqhelekileyo kunye neenduli zeLigurian, indlu inokufikelelwa ngokuhamba malunga neemitha ezingama-200 (ngoko ke sincoma ukuzisa imithwalo elula kunye nawe) kwaye, ukongeza kwinduduzo yendlu evaliweyo, unako. uthathe ithuba kwizikhewu ngaphandle exhobele kwimpilo-ntle yakho. Kuya kuba ngamava ekunxibelelaneni kwendalo kunye nengxolo yayo apho uya kuzintywilisela ukuhlaziya.
Ikhowudi yeCitra: 010064-LT-0013
Indlu esizigubungeleyo migangatho-2 kwaye ziquka: okulala 2 (enye kunye esililini kabini, enye 2 iibhedi kwibhanka omnye), 1 lokuhlambela kunye kwigumbi lokuhlala enkulu isofa nesilili kwisitulo kunye nokufikelela ithala kumgangatho ophezulu. indawo yokuhlala enomoya enekhitshi kunye nelinye igumbi lokuhlambela kumgangatho osezantsi kunye nokufikelela kwigadi yabucala.
I-Uscio yidolophu encinci kwi-hinterland yaseLigurian i-10 yeekhilomitha ukusuka e-Recco kunye ne-20 esuka e-Santa Margherita Ligure kodwa ingenayo inzala; ungandwendwela, umzekelo, imyuziyam yewotshi okanye icawa yamaRomanesque esembindini wedolophu eqala ngomnyaka we-1000 AD.
Umbuki zindwendwe ngu- Giulio
Njengomphathi wesakhiwo, ngexesha lokuhlala kwakho ungathembela kum ukuba ufuna nantoni na, uya kuqonda ukuba ndingumntu oluncedo kakhulu kwaye owamkelayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Uscio